IL 76 MD waxaa Ilya Kulikov (Monumentum), Kirill Konovalov, Denis Urban
Su'aal IL 76 MD waxaa Ilya Kulikov (Monumentum), Kirill Konovalov, Denis Urban
sano 2 2 bilood ka hor #574 by guga
Waxaan ka imid Italy waanan ahay, halkan
Waxaan soo dejiyey qaar ka mid ah fara-gelinta Rikoooo waxaanan jeclaanay tayada xulashada boqolaal addon ah ee boggan.
My download ugu dambeeyay waa IL-NNSXX cusub Ilya Kulikov (Monumentum), Kirill Konovalov, Denis Urban.
Waxaan dareemayaa inay tahay addon weyn, laakiin ma awoodi karo inaan xaqiijiyo.
Nasiib darro fs2004 ayaa dhibaatada uga digtay feylka qaar ka mid ah markaad bilaabayso oo aad shil gashid diyaaradda diyaaradda.
Dhibaatadu waxay u muuqataa mid la xidhiidha faylashaas ku jirta faylka "Model Model" oo leh calaamado qalfoof ah oo ku qoran magaca.
Qofna ma wuxuu lahaa dhibaatooyin isku mid ah mana garanayo nooc ka mid ah xalka?
Mahadsanid qof kasta ayaa i caawimi kara ama i ...
sano 2 2 bilood ka hor #575 by Dariussssss
Dhibaato isku mid ah ayaan la lahaa markii aan isticmaalayay FS2004. Qofkii ka yimid Ruushka si uu u turjumo, uma maleynayo inuu jiro hab lagu isticmaalo.
Waxay ka shaqeysaa FSX, laakiin ma jirto habab loo isticmaalo ...
Waxaa laga yaabaa inaanay noqon mid qurux badan, ilaa iyo inta wax laga xalliyo, kaliya ka saar. Wax la mid ah diyaaradaha Ruushka ... wax walbo waa Ruush. . .
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: guga
sano 2 2 bilood ka hor #576 by Gh0stRider203
Hadaad i siisid shaashadda, waxaa laga yaabaa inaan heli karo qof inuu turjumo.
sano 2 2 bilood ka hor #577 by guga
Waad ku mahadsan tahay Dariussssss iyo Gh0stRider203
Dhab ahaan marka fs2004 uu bilaabmayo, wuxuu leeyahay ma qaadi karo faylasha (kuwaas oo isticmaalaya 'halkii calaamadaha cyrillic)
Oo markaan isku dayo inaan diyaarad ku duulo, fs ayaa ka digtay khaladaadka isku midka ah markii uu dhaco.
Waxay u muuqataa in aysan xakamayn karin faylashaas. Waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay jilayaasha loo isticmaalo magacooda.
Waxaan u maleynayaa in qorayaasha waa inay bedelaan magacyada faylashaas oo ay saxeexaan faylka .mdl.
Si kastaba ha ahaatee waxaan isku dayi doonaa inaan sameeyo shaashadda (ama soo dir farriimaha qaladka saxda ah) oo diyaariya liiska faylasha (iyaga oo rajeynaya in calaamadaha cajaladda la nuqulo)
Dhawaan ayaan soo laaban doonaa
Thanks mar kale
Bilood 9 5 maalmood ka hor #1205 by Janne04
cruga wuxuu qoray:
Qofna ma dhibaatooyin isku mid ah yeeshay Rachat prêt oo garanaya nooc ka mid ah xalka?
Waan ku faraxsanahay, waan ku faraxsanahay inaan ku ogaado